Garoonka diyaaradaha ee Kismaayo magaca loo bixiyey ma kii mudnaa baa?… – Hagaag.com
Garoonka diyaaradaha ee Kismaayo magaca loo bixiyey ma kii mudnaa baa?…
Posted on 10 Maajo 2019 by Admin in National // 0 Comments
Garoonka diyaaradaha ee Kismaayo magaca loo bixiyey ma ahan kii mudnaa, waayo markan halgan iyo gobanimadoon aan ka hadleyno qofba meel ayuu ka halgamay waqti gaar ah iyo sifo gaar ah ayuu u halgamay.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halgankiisa ma aha mid la qarin karo, taalo qaran baa loo dhisay, Kismaayo iyo koonfurta halgamayaasha aan naqaan waa SYL oo gaarsiiyey dalkan xurriyada maanta faraha ka sii baxeyso, waxay ila tahay aniga in laga fiirsado markii meel ama goob qof loogu magac darayo si qofkaasi loogu xuso sharaf iyo wanaagii uu dalka iyo dadka u soo qabtay ee caatifad xukun ama qabiil ku saleysan lagu magacaabin, waayo qofka iyo ehelkiisa ayey magaca ka xumeyn kartaa.
Aniga waxay ila tahay kuna qurux badan tahay in garoonka loogu magac daro Allaha ha u naxariistee (Timiro Cukaash), waxaan taasi ku sababeynayaa halgankeeda hadal kama taagno.
Marka hore waa hooyo halgankii Kismaayo ee Agosto taariikhda meel ka gashay ee la wada ogyahay iyada iyo gabdhaha iyo hooyooyinkii kaleba.
Garoomada dalka oo dhan waxaa loogu magac daray rag u badan madaxdii dalka horey u soo hogaamisay.
Maxaa diidaya in loogu magac daro Mama Timiro Cukaash ayna matasho haweenka Soomaaliyeed ee dalkan u soo huray dhiiggooda iyo xoolahooda iyo dahabkooda.
Mudane Axmed Islaan Garoonada, dugsiyada, Isbitaalada, Degmooyinka, Waddooyinka, waa meelaha Ummadu ay wada leedahay, qofka lagu magacaabayo waa in uu ahaado qof ummada ogtahay, ogoshahay, ku faani karto taariikhdiisa ama taariikhdeeda sida SYL oo kale.
Waxaan ku kalsoonnahay inaad cod gelin doontid oo Soomaali u soo bandhigi doontid arrintan, waxna ka qaban doonto.